Wasiir Dubbe “Hasha diideysa, maqaarka meel khaldan bay ka ursataa” | Dhacdo
Wasiir Dubbe “Hasha diideysa, maqaarka meel khaldan bay ka ursataa”
Iyadoo lagu guda jiro wejiga labaad ee Doorashada Baarlamaanka (Golaha Shacabka) ayaa Midowga Musharaxiinta qaarkood ay walaac ka muujiyeen qaabka ay doorashada ku socoto.
Guddiyada Doorashooyinka ee Maamul Goboleedyada qaarkood ayaa bilaabay diiwaangelinta iyo shahaado guddoonsiinta xubnaha musharaxiinta ee daneynaya ka mid noqoshada Golaha Shacabka.
Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sidoo kale ka tirsan Golaha Midowga Musharaxiinta ayaa saaka mar kale ku celiyay in sida ay ku socoto Doorashada Golaha Shacabka ay baal marsan tahay shuruucdii lagu heshiiyay ee doorashooyinka dalka.
Wasiirka Warfaaafinta Somaliya, Cismaan Abokar Dubbe ayaa sheegay in doorashada ay ku socoto waddada saxda ah, inkastoo sida uu sheegay doorashada dadban ay tahay mid dhib badan, ayna leedahay culeyso dhaqaale, amni iyo mid siyaasadeedba.
“Waad ogtihiin doorashadu waa doorasho dadban, doorasho dadbana way iska jiitantaa. Doorashada hal qof iyo hal cod ayaa hal maalin dhacda, laakiin doorasho dadban way jiitameysaa. Waad ogtihiin culeysyada ay leedahay, culeys dhaqaale, culeys amni iyo culeys siyaasadeed, laakiin xukuumaddu uu hoggaamiyo Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxay ku socotaa waddadii saxda ahayd, doorashadiina qayb waa lagu guuleystay Labadii Aqal.” Ayuu yiri Wasiirka oo BBC la hadlay.
Mar wax laga weydiiyay dhaliisha mucaaradka u jeedinayan Ra’iisal Wasaaraha ee ah inuu ka gaabiyay ballanqaadkiisii ahaa inay doorashadu noqon doonto mid daahfuran oo xalaal ah ayaa sheegay in Ra’iisal Wasaaraha iyo xukuumaduba ay aaminsan yihiin in shaqadii loo igmaday ay u wadaan, sidii ugu wanaagsaneyd.
“Runtii Ra’iisal Wasaaraha iyo xukuumaduba waxay aaminsan yihiin in shaqadii loo doortay ee loo igmaday ay u hayaan, sidii ugu fiicneyd ee ugu quruxda badneyd.” Ayuu yiri Cismaan Abokar Dubbe, Wasiirka Warfaafinta Somaliya.
Wasiir Dubbe ayaa yiri “Hasha diideysa, maqaarka meel khaldan bay ka ursataayee, anigu waxaan is leeyahay mucaaradka ma’ahan ee mucaaradka waa taageereen hannaanka, waa taageereen geeddi-socodka doorashada, waa taageereen shaqada Ra’iisal Wasaaraha.”
Dubbe ayaa hadalkiisa sii raaciyay “Laakiin qof wax tabasho sheegaya dunida lagama wayo. Waxaan u maleynayaa hal qof oo aan natiijada waxba ka filayn ayaa laga yaabaa inuu Ra’iisal Wasaaraha dhaliilayo, laakiin geediga waa socdaa.”
Doorashadan ayaa noqoneysa middii ugu xasaasisanayd ee dalka laga qabto, tan iyo intii doorashooyinka Somaliya loo soo wareejiyay in lagu qabto gudaha dalka, muddo sagaal sano laga jooggo.